Madaxweynaha DDS oo socdaal ku maraya degaanado dhowr ah (Sawiro) – Radio Daljir
Juunyo 17, 2021 8:42 g 0
Waxaa Magaalada Jigjiga ee Caasimada Dawladda Deegaanka Soomaalida DDS ka ambabaxay Wafti balaadhan oo uu hogaaminayo Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar.
Socdaalkan Madaxweyne Mustafe ayaa noqondoona mid uu kusoo marayo Dagmooyin kamid ah Gobolka Jarar,Qoraxey iyo Doollo ee DDS.
Ujeedka socdaalkan ayaa ahXadhig kajarka mashaariico lasoo gabagabeeyey iyo dhagaxdhigida mashaariico kale oo badan iyo waliba sidii bulshada qaybeheeda kala duwan ulayeelanlahaa latashi si loo ogaado baahiyaha aasaasiga ee shacabku qabaan.
Madaxweyne Mustafe Muxumed iyo waftigii uu hogaaminayeyAyaa ugu horayn gaadhay Dagmada Yoocaale ee G/Jarar,Halkaasoo shacabku jidadka lasii taagnaayeen caleemo qoyan ayakoo safaf utagaanan jidadka lagasoo galo Yoocaale.
Madaxweyne Deni oo caawa Madaxtooyada Garoowe ku qaabilay Ganacsatada Puntland (Sawiro)